ရေကူးကန်ထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်း ကို မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ရေကူးကန်ထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်း ကို မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
ရေကူးကန်ထဲမှာ ရေကူးဝတ်စုံလေးနဲ့ အရမ်း ကို မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ်လေး ကို ပိုင် ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် မရမ်ဆိုင်းနူး ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်… ။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမော စရာ အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေ နဲ့ ပုရိသ တွေ ရဲ့ ရင် ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထား တဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် လေး ဖြစ် ပါ တယ်.. ။ လတ်တ လောမှာ တော့ သူမ ရဲ့ အမိုက် စား အလှ တရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထား တဲ့ ရေကူးကဲထဲက အလန်း စား ဗီဒီယိုလေး ကိုဖော်ပြ ထား တာ တွေ့ရ ပါ တယ်.. ။ ဗီဒီယို လေး ဟာ ကြည့်ရှု သူ တွေများ ပြား ခဲ့တာ ဖြစ် ပြီး ပုရိသ တွေ အများ ဆုံး ဝန်းရံ ခြင်း ခံနေ ရ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ် … ။
သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာ ကို လည်း လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ် တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိတာ လည်းတွေ့ ရပါ တယ်..။ သွယ် လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ အတူ လှပကြည် လင် တဲ့ အသား အရေ ကို ပါ ပိုင်ဆိုင် ထား ပြီး သူမရဲ့ အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူ လေးလည်းဖြစ် ပါ တယ် … ။
ဗီဒီယို လေး ထဲမှာ မရမ်ဆိုင်းနူး တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက် လွန်းနေ ပြီး သူမ ရဲ့ ပရိသတ်ကြီး အ တွက် တင်ပေးထား တာ ဖြစ်ပါ တယ်… ။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှ က တော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေ တာ အမှန်ပဲ ဖြစ် ပါတယ် … ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆိုင်းနူး ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး ကို ကြည့်ရှု နိုင်စေ ရန်ဖော် ပြပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ မရမ္ဆိုင္းႏူး ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္… ။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာ စရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ ရင္ ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူ ထား တဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလး ျဖစ္ ပါ တယ္.. ။ လတ္တ ေလာမွာ ေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္ စား အလွ တရား ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထား တဲ့ ေရကူးကဲထဲက အလန္း စား ဗီဒီယိုေလး ကိုေဖာ္ၿပ ထား တာ ေတြ႕ရ ပါ တယ္.. ။ ဗီဒီယို ေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူ ေတြမ်ား ျပား ခဲ့တာ ျဖစ္ ၿပီး ပုရိသ ေတြ အမ်ား ဆုံး ဝန္းရံ ျခင္း ခံေန ရ တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး မ်ားစြာ ကို လည္း လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ေပၚ တြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာ လည္းေတြ႕ ရပါ တယ္..။ သြယ္ လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ နဲ႔ အတူ လွပၾကည္ လင္ တဲ့ အသား အေရ ကို ပါ ပိုင္ဆိုင္ ထား ၿပီး သူမရဲ့ အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူ ေလးလည္းျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
ဗီဒီယို ေလး ထဲမွာ မရမ္ဆိုင္းႏူး တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္ လြန္းေန ၿပီး သူမ ရဲ့ ပရိသတ္ႀကီး အ တြက္ တင္ေပးထား တာ ျဖစ္ပါ တယ္… ။ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ အလွ က ေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားေန တာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ … ။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ဆိုင္းႏူး ရဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယိုေလး ကို ၾကည့္ရႈ နိုင္ေစ ရန္ေဖာ္ ျပေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
source & photo credit : Maran Seng Nu facebook account.
Previous post အကိတ်မလေး မေပန်းချီကတော့ ပိုက်ဆံလဲမရှိ အပျင်းလည်းကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေကို ဒဲ့ပြောချလိုက်ပြီ (ရုပ်သံ)
Next post တောင့်တင်းလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အထင်းသားပေါ်အောင် ချပြလိုက်တဲ့ မတ်မတ်အေးသောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး